Urururka G10 oo ku talaabsaday horumar iyo talaabo ku dayasho mudadan. | Anti-Tribalism
← Waxgarad ka tirsan beesha Mudulood oo ka soo horjeestay Imaam ay sheegeen in Muqdisho loogu duubay beelaha Banaadiriga
Ra’iisul Wasaaraha oo faahfaahiyey soo xulidda baarlamaanka cusub →
Urururka G10 oo ku talaabsaday horumar iyo talaabo ku dayasho mudadan.
09.04.12 – Ururuka G10 oo doonaya inuu isku keeno Soomaalida degan Norway ayaa waxuu hada ku guulaystay inuu marka hore isku keeno beelaha Hawiye.
Shirar iyo wadahadal u dhexeeya beelaha hawiye ee degan Norway beryahaan ayaa soo gaba gaboobay hada.
Warcusub Media oo waraysiyo kala duwan la yeelatay madaxda ururka G10 ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in ururka G10 mideeyay beelaha Hawiye ee degan Norway.
Suldaan Mohamed Suldan Hassan oo loo yaqaan Suldaan Foodeey oo u waramaya Warcusub Media ayaa yiri sidaan:
“Waxaan kuu cadaynayaa in G10 horumar samaysay oo hal mowqif leedahay hada.”
Shahar Abdi Afrah oo ku raacay suldaanka ayaa isna yiri sidaan:
“G10 waxaa lagu sameeyay dib uhabeen waxuuna uruku yeeshay aqoon yahano iyo odaydhaqameedyo yaqaan sida loo walaaleeyo Soomaalida. Waxaan rajaynaynaa inaan u gudubno midaynta Soomaalida Norway.”